Xisbigii loo hanweynaa ee Waddani iyo halyeyadii gobolka Awdal halkay kala marayaan? | Awdalpress.com
Xisbigii loo hanweynaa ee Waddani iyo halyeyadii gobolka Awdal halkay kala marayaan?
Waxa Daabacay staff-reporter on May 14th, 2017 and filed under Daily Somali News, Editorial, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Akhristow qormadani waxa ay hoggaaminaysaa taxani aan ku faallayn doonno guud ahaan siyaasadda Somaliland gaar ahaanna ta xisbiyada tartamaya, oo dhawaan ay ololahoodii billaabmi doonaan.
Nin aannu walaalo nahay ayaa sheekada uu ka yaabo marka uu ka sheekaynayo, hal-hays ka dhigta….BALAAYO AF LAGAMA DHAWREE…..dabeedna sheekada ayuu bilaabaa!
Anna in badan ayaan baryaba ka aammusnaa ka hadalka siyaasadda, immiga ayaanse la sugayey. Waxanan qoraalkayga gundhig uga dhigayaa…..NIN IS MOODABA…NIN AAN U OGAYN BAA BI’IYEY.
Waxan ognahay in xisbiyada qaranka Somaliland ee tartankoodu socdaa, ay xiddadoodu ku arooraan qabiil, laakiin aanu jirin wax mabda’ la yidhaa. Ha ku arooree, waxa sharafta iyo guusha xisbigu ku jirtaa in qabiilka laftiisu leeyahay xuduud aan la dhaafi karin. Sidoo kale waxa lama huraan ah in aan hoggaanka xisbiga la kala hororsan, ee wada shaqayn iyo is qaddarin la yeesho. Balse haddii shakhsiyaadka qaar isku arkaan amma isu muujiyaan in ay iyaga uuni muniim yihiin ama taladu ka go’do, dee rag aan u ogayn ayaa jira…..waa sida immiga ka dhex muuqata xisbiga Waddaniye, waxa dhici karta in rag ama dumar loo baahnaa ay habeen madaw ka huleelaan.
Hiigsiga ummadda reer Somaliland waa ISBEDDEL…. ( dawladnimo, caddaaladeed iyo saami qaybsi ) oo si sharaf leh uga dhaca dalka Somaliland. Xisbi walbana waxa uu boodhka ku qortay in uu intaasiba samayn doono. Bayaankoodana way ku qorteen, laakiin weli reer Awdal kuma qanacsana siyaasadda xisbiyada. Waxana qaladka oo dhan samaynaya dadka horboodaya gudo iyo dibadba ee isku haysta in ay shidhka u fadhiyaan tareenka xisbiga, mana arkayo illaa iyo immiga rajo ay dadka reer Awdal ku qancaan. Oo wada tashi ku yeeshaan.
Taasina waxa ay horseedi kartaa, in kalsoonidii lagala noqdo xisbiga Waddani, ee ay haldoorka reer Awdal hawshiisa u darbanayaayeen. Loona faaruqiyo shakhsiyaad aanan garanayn sida dadka la isugu keeno ammaba gaabsi ka ah aragtida meesha loo socdo.
Nin jeclaysi iyo reer hebel, waa meel soke marka geeddiga siyaasadeed uu hayaan adag ku jiro. Waxana loo baahan yahay in dad fahmo badan oo ka saari kara la helo. Haddiise uu hoggaanka xisbigu taa garan waayo, waa nasiib darro. Guul darro ayaana gondihiisa taalla.
Sida aan ka warqabno, doorashada soo socotaa maaha mid dhib yar, xisbiga Kulmiye ee tartanka ku jiraana, waa mid aan la dhayalsan karin, una orda in uu hanto shakhsiyaadka wax ku soo kordhin kara xisbigooda. Inta aan ogahayna xisbigaasi uma xidhna dad gaar ah. Reer ama koox xidhiidh la samaysana kuma xidhaan dhaqaale iwm. Askariga xoogga badan ee hoggaaminayaana waa shakhsi uu warkiisu cad yahay. Dad badan oo aan aqaannaana waa ay guuxaan. Hareerihiisana waxa fadhiya rag yaqaan aan habeen iyo dharaar seexan.
Hadal iyo gaba gabo, hoggaankii xisbiga Waddani, ma khuurradaa ayey ku jirayaan, misa dadka xisbiga looga cararayo ayey ka tashanayaan? Kulmiye iyo UCID na waan salaamayaa…..
This post has been viewed 8181 times.